माधव नेपाललाई विश्वास गर्ने आधार छ? लगायतका प्रश्नमा काँग्रेस युवा नेता गगन थापाको जवाफ
सुरज डिजी खनाल सोमबार, जेठ १०, २०७८
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिती घोषणा गरेपछी अहिले सरकार बाहिर रहेका राजनितीक शक्तिहरु आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले सरकारले जालसाजिपुर्ण ढङ्गले संसद भङ्ग गरेर मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलेको निष्कर्षसहित कानुनी प्रकृया थालनी गरेको छ। नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादि केन्द्र), जनता समाजवादि पार्टी नेपाल (जसपा) को उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समुह सम्मिलित यो विपक्षी गठबन्धनलाई सत्तारुढ नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समुहले पनि सघाइरहेका छन्। यहि सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पुर्वमन्त्री गगन थापा र नेपाली पब्लिकका कार्यकारी सम्पादक सुरज डिजी खनालविच भएको संक्षिप्त वार्तालाप...
अब देशको राजनीतिले कुन दिशा लिन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो विघठन असंवैधानिक छ भनेर संसदको हामी बहुमत सदस्यहरु अदालत जाने अन्तिम चरणमा छौ। अब फेरी केहि समय अदालतको कोर्टमा नेपालको राजनितीको बलले प्रवेश पाउने भयो। अदालतको निर्णय नआउने बेलासम्म सबैको ध्यानदृष्टि त्यतैतिर रहने भयो। र जति अदालतले छिटो यसको फैसला दिन्छ त्यति छिटो राजनिती चाँहि सङ्ग्लीएर जान्छ। केहि समय हामीले चाहे पनि नचाहने पनि अड्कीने र अल्मलिने अवस्था त रह्यो नै।
तपाईहरुले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनुभएको छ। सरकारले संवैधानिक भन्छ। कानुनविद्हरुको मत पनि विभाजित देखिन्छ नि?
सरकारले त यसलाई संवैधानिक भनेर भन्ने कुरा कुनै अनौठो कुरा हुँदै भएन। सरकारी कानुन व्यवसायीहरुले पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरा अनौठो भएन। हामी बहुमत सदस्यहरुले अदालत जाँदै गर्दा अदालतमा पनि बिन्ती हाल्न जान लागेको पनि होईन, अदालत गुहार्न जान लागेको पनि होइन।
यो संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने हाम्रो संवैधानिक प्रवन्ध भएकाले गर्दा तिमीले व्याख्या गरिदेउ भन्न जान लागेको हो। त्यो व्याख्याको आधार पनि लामो कुरा छैन्, अस्ति भर्खर अदालतले जुन व्याख्या गरेको छ। पुष ५ गतेको कदमको बारेमा व्याख्या गर्ने क्रममै स्पष्टसँग ७६ (५) को प्रयोग कसरी हुन्छ भनेर उसकै अक्षर छ भावनाको कुरा पनि होइन।
उसको अक्षरले स्पष्टसँग उसको आदेशमा सबै कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले अदालतकै आदेशले पनि को संवैधानिक हो, को असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट बनाइहाल्छ। अदालतमा गइसकेपछी अदालते के भन्छ भन्ने कुरा त उसको मुखबाट सुन्न हामीले प्रतिक्षा गर्नैपर्छ।
तपाईहरुको लडाई अदालतमा गएर टुङ्गीन्छ की केहि सडकतीरका पनि तयारी छन् ?
राजनीतिक दल हो, हामीहरु संगसँगै राजनीतिक कार्यक्रमहरु, प्रतिरोध कार्यक्रमहरु हुन्छ नै। जुन महामारीको अवस्थामा हामीहरु छौ, त्यो प्रति हामीहरु सम्पुर्ण रुपमा संवेदनशिल छौ। हामीले धेरै महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरु गरिसकेको हुन्छौ। तर, महामारीको कारणले गर्दा हाम्रो हात, हाम्रो मुभमेन्ट सबै बाँधिएको छ। त्यसमा हामीले एउटा सिमितताभित्र बसेर मात्र आफ्नो कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक कार्यक्रमहरु पनि गर्छौ।
महामारी नियन्त्रणका बिषयमा कांग्रेसले त्यति चासो देखाएन जति सरकार गठनको बिषयमा देखायो, भन्ने आरोप छ नि?
सरकार गठनको विषय न हामीले चाहेको बिषय हो, न हामीले निम्त्याएको बिषय हो यो। न हामी अविश्वासको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री हटाउन गएका थियौ। अविश्वासको प्रस्ताव काँग्रेसले राख्नुपर्छ भन्दै त्यत्रो लामो समयसम्म दबाव रहँदै गर्दा पनि हामी कहिल्यै पनि गएनौ र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर यो अवस्था ननिम्त्याएको भए हामी अहिले पनि विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको समयभरी कति घण्टा, कति दिन हुन्छ अप्ठ्यारो नआवोस भनेर हामी काम गर्थ्यौ।
सचेत नागरिकले यसलाई बुझ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यी कुनै पनि कुराहरु हामीले निम्त्याएको पनि होइन, हाम्रो कारणले पनि होइन। महामारीको सन्दर्भमा पनि के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो यती नालायक र अयोग्य सरकार छ, यसलाई हामीले गर्नसक्ने जती सबै कुरा भनिसक्यौ।
यसलाई हामीले दबाव पनि दियौँ, यसलाई हामीले विन्ति पनि गर्यौ। हामी सम्पुर्ण रुपमा सबै कुरा बिर्सेर सरकारले गर्ने सबै काममा सम्मिलित हुन तयार छौ भनेर पनि भन्यौ। तर, हामीले गर्ने के हो त अब?
हामी यसलाई प्रश्न पनि गछौ, दबाव पनि दिन्छौ। हामी निर्णय गर्ने ठाँउमा त कहि पनि छैनौ। सरकारको आदेशले त आज हामी घरभित्र थुनिएर बसेका छौ। हामीहरु कुनै ठाँउमा जम्मा हसन पाउँदैनौ, छलफल–भेला गर्न पाउँदैनौ। आजको दिनमा गर्न पाउने अख्तियार त सरकारसँग मात्रै छ। जुन अख्तियार प्राप्त गरेको सरकार छ, उसको प्राथमिकतामा के छ त? यहाँनिर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
तपाईहरु भेला हुन पाउदैनौ भनिरहँदा पनि आइतबार मात्रै तपाईहरु हस्ताक्षरका लागि बानेश्वरमा भेला हुनुभयो, त्यस्तै तदारुकता महामारीको नियन्त्रणमा देखाउन सकेन भन्ने छ त?
कोरोना महामारीको सन्दर्भमा बढी गर्नुपर्ने, अप्रयाप्त भयो भन्ने कुरालाई म इन्कार गरिरहेको छैन। सामुहिक रुपमा पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला। तर, महामारीको सन्दर्भमा यो एकदमै साँघुरो कुरा भयो। यो तदारुकता केहि पनि होइन।
यो सरकार गठनका लागि हामीले देखाएको तदारुकता केहि पनि भएन। हामी त चुपचाप लागेर बसिरहेको, महामारीको कुरामा काम गर, तिमी सम्पुर्ण रुपमा काम गर, तिमीलाई हामी मदत गर्छौ, सहयोग गर्छौ भनि पनि रहेको गरी पनि रहेको हो। यो स्थितीमा गर्नुपर्ने चाँहि के हो त हामीले? राष्ट्रपती मध्यरातमा जम्मा भएर भोलीसम्मको समय दिनुहन्छ, अनि हामी रातारात जम्मा नभएर गर्ने के त अहिले?
अहिले सरकार पक्षका नेताहरुले काँग्रेस बाहिर बिरोध गरिरहे पनि भित्रभित्रै चुनावको तयारी पनि गरीरहेको छ भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ?
त्यो बेकारको कुरा हो। एउटा राजनीतिक दल हर हमेशा चुनावको तयारीमा हुनुपर्छ। यो कुनै अस्वभाविक कुरा पनि होइन, गलत कुरा पनि होइन। हामीले आफ्नो काम गरिरहँदा चुनाव आउँछ, चुनावमा जनताको मन जित्नुपर्छ, चुनावमा मत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोँचिरहेका हुन्छौ, गरिरहेका हुन्छौ।
त्यो कोणबाट हामी सधैँ चुनावको लागि तयार पनि छौँ, तयारी गरिरहेका पनि हुन्छौ। तर, अहिलेको यो सन्दर्भमा चाँहि यो असंवैधनिक कदम सच्याउनेभन्दा बाहेक, यसको प्रतिरोध गर्नेभन्दा बाहेक केहि सोचेका छैनौ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई नै सदर गरेर निर्वाचन हुने भयो काँग्रेस त्यो निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ की हुदैन?
अदालतले गरेको निर्णयमा के गर्ने भन्ने कुरा अहिलेदेखी अनुमान लगाइराख्ने कुरै होइन। अदालतले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, हामी पनि मान्छौ। अहिले हाम्रो विश्वास चाँहि सर्वोच्च अदालतले संविधानले लेखेको, देखेको भन्दा बाहेक केहि कुरा निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरा यतिखेर हामी अनुमान नै लगाउदैनौ।
नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षलाई अझै पनि विश्वास गरेर अघि बढ्ने आधारहरु छन्?
हामीहरु सँगै हस्ताक्षर गरेर बुझाएका छौ। विश्वास–अविश्वास गर्ने भन्ने घटनाको आधारमा गर्ने हो। भावनामा बग्नराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। आज हामी कहाँ छौँ, हामी ठिक ठाँउ उभिँदै गर्दा हामीसँग को उभिन्छ भनेर हेर्ने। माधव नेपाल चाँहि यो लडाईमा हामीसँगै हुनुहुुन्छ। त्यहि कुरालाई हेर्ने हो, आधार बनाउने हो।
#राजनीति #गगन–थापा #संसद_विघटन
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १०, २०७८ १०:१०